UNawomi Campbell amakha kusukela onobuhle abadumile kwezemfashini
UNawomi Campbell, amakha awo sichaza ku-athikili yethu okokuqala wethulwa emphakathini amakha ukukhiqizwa yayo siqu ngo-1999. Khona-ke kwaba khona iphunga, okuthiwa - UNaomi Campbell. Nakuba imodeli owaziwa imfashini waqaphela ukuthi anazo i ikhono elimangalisayo ukudala iphunga mesmerizing futhi wanikeza abalandeli bakhe komunye ngamakha ekhumbulekayo 12. Kodwa kule Panther Black akuvimbi, ngokuqhubeka ukwakha amakha entsha yonke ukunambitheka.
UNawomi Campbell nguNawomi Campbell
Eyokuqala amakha isipiliyoni imodeli edumile emhlabeni kwakuwukuphela kwengoma "UNawomi Campbell". Perfume - iyithuluzi ukuthi kumele kube intokazi, echumayo kunoma yiliphi ibhizinisi, ubuntu namandla, engazi ukuthi kunqotshwa. Lonke usuku emzimbeni kuyoba iphunga langa. Kuyomthokozisa indlovukazi yakhe futhi ungenele stupor of akhe iso-kokuphuma zonke lucky ngokwanele ukuba nikuzwe.
Nika intombazane freshness, nobumsulwa kanye kalula ukunambitheka "UNawomi Campbell". Imimoya izogcizelela ukwehluka, ikakhulukazi labo abakhetha sizigqoke. Lokhu amakha is kunakwe zonke izinto isifuna lapho ekhetha Iphunga amasha. Ngiqinisile iphunga Blissful iqala ukulele wakhe magnolia elimnandi, pepper eCayenne, zamapetshisi, kakhukhunathi, bergamot kanye Mandarin. Motifs Floral lily esigodini, wavuka, heliotrope, futhi jasmine ukunikeza flavour of freshness ukuzwela. Ukuqedelwa sokuqanjwa ngamanothi vanilla yemisedari, e-sandalwood, must futhi caramel.
Iphunga exuberant kusukela ukuqoqwa uNawomi Campbell
Perfume "Cat Deluxe" asalokhu enobudlova njengendlela umlingisi ome njengeqanda of a imodeli phezulu. Perfume Kukhululwa 2006. Lokhu perfume toilette kuyinto ngokunembile kakhulu kugcizelela isimo sangaphakathi umnikazi. Breathing e amakha ongalawuleki ngakho, ngokushesha kubonakala intombazane enhle nge umphefumulo engalawuliwe. Rebel, ayegcwele, nephunga ezicacile, nginenhliziyo nokuphikelelayo kufihliwe i isitsha ezithakazelisayo futhi ekhangayo. Bottle uba nombala ingwe-pink, okubonisa ukuthi sokunethezeka, isisa romance nephunga.
Cat Deluxe - iyona lokuhlushwa inkani, ukuzethemba, isibindi, kanye neziphathelene nezocansi. Intombazane ubani oye waba ku le mimoya, akwazi ukunqoba yonke le mbulunga. Lona wesifazane kuyinto ezikhangayo, kusitsho abukhali, isisa umusa. Nge "Cat Deluxe" izintokazi ubuntu usendaweni yokuqala. Lena akuyona nje accessory Chic, ithuluzi elingase ngcono isimo womnikazi wayo.
Kuchubeka Cat Deluxe amakha umugqa baba "UNawomi Campbell" Cat Deluxe at Night. Basuke lenzelwa ubuhle ezimele futhi sexy okuyiwona akunandaba ukwamukela imibono yabanye, uyabuthanda yena. amanzi toilet ezimiselwe ukugqoka charm ebusuku indlovukazi. Le ntombazane ihlobene Wild, eyabonakala on the imilingo ebusuku ukuzingela. Yena Unesibindi, kodwa Gait kancane ihamba emigwaqweni emnyama edolobheni ebusuku. Umkayo unxanela adventure, futhi lokhu kufakazelwa amehlo amahle.
Amakha bagxila omningi iphunga okuqondene uchungechunge imikhaya ehlukene. Lapha kuthiwa wazizwa Evumelana bok futhi ezimibalabala banezimfanelo amandla omlingo okudonsa. Base amanothi Cat Deluxe at Nignt - ngokulondekile lesi sithelo, peony, currant, ukotini, inhlaka ipheya. isixha okunjalo uzoguqula noma imuphi owesifazane ibe ikati zandile futhi zasendle.
amakha Royal nguNawomi Campbell
Nobuhle Okuphakade amakha esidalelwe unkulunkulukazi, owakwazi ukushintsha izwe lomunye umuntu. Wona athwalisane ntokazi, wakwazi ukunikela ukuphila, sinikeze iseluleko esihle, bezilwane ukuhlinzeka nokuthula kwengqondo. Le ntombazane idinga, futhi kudingekile, ukwethula izipho zikanokusho futhi kuyabiza. Nobuhle Okuphakade Perfume isethelwe amantombazane amahle, romantic and okuhle. Inenekazi ubani okhetha siliphunga - kuwumuntu ohlakaniphile engakutholi ukuhlala entanyeni, ikakhulukazi, imilenze yakhe ensimbi alenga.
Nobuhle Okuphakade etholakalayo eziningi limited. Kumila amanothi amakha kuhlanganisa anise, bergamot, apula, upelepele, vanilla, usinamoni, i-sandalwood, jasmine ne magnolia. Le nhlanganisela kuyinto izintokazi efanelekayo, ukuphefumula engalingani ukuze zegolide. Golden luhlaza amanzi yangasese ibhodlela lifanekisela ingcebo okunethezeka.
Kukhona uchungechunge amakha imodeli ethandwa kusho ukuthi amandla futhi umnikazi wawo ukuxoxa abandayo ebusika ebusuku. Lokhu amakha "UNawomi Campbell" (isithombe kukhonjisiwe ngezansi) Winter Kiss. Lokhu Iphunga uyohlale fashion, ukuthi izokwenza flirty, kwemizwelo ukudlala. Nge la makha, uyoba kahle isayensi Luhambo futhi ufunde indlela abe enhle kunazo.
"Winter Kiss" ngeke kudonsele ukunakekela, ujike ntombazane eyodwa futhi kuphela Beau wakhe. Lokhu perfume toilette kuzodala ebulalayo, sexy isithombe, futhi akekho oyoke ukuqagela ukuthi yini imfihlo yempumelelo yakho. Amakha hlanganisa amber amnandi, ezimibalabala kanti iphunga elinuka. Amanothi phezulu amakha Sihlala anise, pepper pink futhi bergamot. Isilinganiso ingoma ukulele bevalela jasmine, ama-orchid kanye freesia. Sandalwood, vanilla must wenza iphathi ukuze base kwengoma.
amazwi Ekugcineni ezimbalwa
Perfume "UNawomi Campbell" got Izibuyekezo kakhulu. amazwi Warm kukhulunywa njengoba abesifazane besebenzisa amakha bona kanye labo efanele wahlanganyela ukudalwa amakha. Girls athande lolu amanzi yangasese zokumelana kanye amakha Chic. Futhi bamakha like ucwaningo elenza uNawomi kanye flavour.
Abanye abesifazane bayavuma ukuthi ekuqaleni asabela ngayo ngokuqaphela ekukhiqizeni Campbell, njengoba ngikukholelwe ukuthi indlovukazi yesikhulumi kungenzeka futhi indlovukazi izwe uketshezi elimnandi. Kodwa manje bezivuma ngobuqotho iphutha zabo futhi bathi imimoya uNawomi Campbell - omuhle wobuciko kweqiniso.
"Eleveyshn Isikhathi izitobhi": ukubuyekezwa. izimonyo Israeli Elevatione isikhathi iyama: amanani
U-Shimmer uyi-tech ephezulu? Ingabe kunjalo?
Matte lipstick "Meybelin" (Maybelline Color ethusayo AMAZING Mattes): Iphalethi, ukubuyekezwa
"Zhiguli-6" - ukubuyekeza imoto Vaz-2106
Ukuphakamisa iminyango Sectional - ukuphepha lula
18 labapheki bodumo ngokuthi ukudla okunempilo alungiselele ekhaya
Ukubuyekeza: ekhaya yaseshashalazini wokudlala. Incazelo, izici, futhi iseluleko okukhetha
Puppet Theatre "Albatross": repertoire, ikheli, ukubuyekezwa
Iphethini Slippers ngezandla zakhe. Indlela thunga Slippers zezingane ngezandla zakhe?
Statue kaFaro Amenemhat III, nezinye izinsalela kwehholo waseGibhithe Hermitage
Ignatievka Umgede: lesikhumbuzo zemvelo, is oyimfihlakalo